‘Lots of mobile phone users look like robots’ (Feb 19, 2015)
361 March 5, 2015
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအလွန်အကျွံသုံးစွဲလာခြင်­းအားဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ လူသားမဆန်ဘဲ စက်ရုပ်တွေ ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတယ်လို့ စာရေးဆရာမောင်ဇေယျာက အခုအပတ်ဒီဘိတ်မှာ သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှူးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမောင်ဇေယျာဟာ သူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းမသုံးရင်တောင် ပိုအာရုံစိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ခံယူထားတဲ­့အတွက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းကို ရှားရှားပါးပါးမသုံးစွဲသူဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ သုံးစွဲသူဦးရေးဟာလည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ၁ သိန်းကျော်လောက်ပဲရှိခဲ့ရာက နေ အခုချိန်မှာ ၉ သန်းကျော်ထိရှိလာပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေတစ်ဆင့်ရရှိလာတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ သုံးစွဲခွင့်ရလာပြီး သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ မိုဘိုင်းကွန်ယက်အပေါ်မှာပဲ အာရုံ စိုက်လွန်းနေတဲ့အပေါ် သူက အခုလိုဝေဖန်သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအပတ်ဒီဗီဘီ ဒီိဘိတ်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘ၀တွေကို ဘယ်လိုသက် ရောက်မှုတွေရှိနေလဲ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“Experts must come back even gov doesn’t ( Feb 26, 2015)
367 March 5, 2015
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူ အားလုံးကို အစိုးရအနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့လိုအပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့သူတွေအပေါ် အခွင့်အရေးတန်းတူပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် အခုအပတ်ဒီဘိတ်မှာအကြေအလည်ဆွေးနွေးသွားခြဲ့­ကပါတယ်။ အခုအပတ်ဒီဘိတ်ကို ပြည်တော်ပြန်တွေရဲ့စိတ်ကူးတွေဟာ လက်တွေ့နဲ့ဘယ်လောက်နီးစပ်သလဲ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြ­ီး နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမင်းညိုကတော့ ပြန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတာတွေရှိနေတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုသွားပါတယ်။
“Experts must come back even gov doesn’t welcome” (27 Feb 2015)
385 March 5, 2015
This week in DVB debate, the studio asks “How do returning experts end up?” Myanmar is sufferingalack of skilled human resources due to the fact that many skilled labours and experts have been leaving the country, especially since the government cracked down since the 1988 uprising. After President Thein Sein came to power …Read more »
How troubled is Burma’s relation with China? (1 Mar 2015)
How troubled is Burma’s relation with China?
DVB Debate about Census
439 March 4, 2015
DVB -24-03-2014 မကြာခင် ကောက်ယူတော့မယ့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြ­ီး ဒီအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေတသားတည်း ပါဝင်နိုင်ခြေရှိ မရှိအေ­ပါ် အခုအပတ် ဒီဘိတ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂံမြေသို့… (၁၀ ရက် ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
472 March 2, 2015
တို့ပြည် တို့မြေ အစီအစဉ် – ပုဂံမြေသို့ DVB Roadshow episode9– 10.01.2015
440 March 2, 2015
မြေလွှာကိုဖွင့် ပြည်ကိုမြှင့်အံ့…. ကျောက်စိမ်းမြေဆီသို့ (၃)
348 March 2, 2015
ဒီဗီဘီရဲ့ အပတ်စဉ် ခရီးသွား #Roadshow အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ တို့ပြည် တို့မြေ အဖွဲ့သားများက ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် လုံးခမ်းတ၀ိုက်ကို အရောက်သွားပြီး ဒေသခံတွေရဲ့ စကား၊ လူမှုဘ၀ သဘာဝတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Doh Pyay Doh Myay အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ညနေ ၅း၃၀ နာရီမှာ ဒီဗီဘီ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ အွန်လိုင်းချန်နယ်တွေမှာ ရှုစားနိုင်ပြီ။